अमिताभ-रेखाको लभस्टोरी जानेपछि तपाई पनि भन्नुहुनेछ – प्रेम प्राप्ति मात्रै होइन ! – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /News/अमिताभ-रेखाको लभस्टोरी जानेपछि तपाई पनि भन्नुहुनेछ – प्रेम प्राप्ति मात्रै होइन !
बलिउड मा जब जब माया पिरतीका कथाहरु भनिन्छन् तब यी दुइको नाम सबैको दिमागमा आउछ । यो नाम हो अमिताभ र रेखा जुन जोड़ी रील लाइफ तथा रीयल दुईवटै मा सुपरहिट रह्यो ।
भ्यालेन्टाइनस् डे को अवसरमा जान्नुहोस त्यो बलिउडको लभस्टोरी को बारेमा जस्को सार्बजनिक रुपमै ठुलै चर्चा भएको थियो ।
उनीहरुको माया जुन कहिल्यै मिलन भएन तर यो माया को बारेमा सबै तिर हल्ला थियो । यो यस्तो पिरतीको कथा हो जस्को जादुको बयान बितेका ति पलहरुले पनि गर्न सक्दैनन् ।
बलिउडमा जब जब माया पिरतीका कथाहरु भनिन्छन् तब यी दुइको नाम सबैको दिमागमा आउछ । यो नाम हो अमिताभ र रेखा जुन जोड़ी रील लाइफ तथा रीयल दुईवटै मा सुपरहिट रह्यो ।
साल 1976 मा पहिलो पटक अमिताभ अनि रेखाले फिल्म ‘दो अंजाने’ मा एकै साथ काम गरेका थिए । उनीहरुले ‘कसमें वादे’, ‘मुकद्दर का सिकंदर’, ‘मिस्टर नटवर लाल’ तथा ‘सुहाग’ नामक चलचित्रमा पनि संगै काम गरेका थिए ।
रेखासंग भेट्नु भन्दा अगाडी नै साल 1973 मा अमिताभको बिहे भैसकेको थियो तर माया बसेपछि यो सबै कहाँ सोचिन्छ र ! दुइजनाकै माया पिरती खूब चर्चा मा रह्यो । 22 जनवरी 1980 मा ऋषि कपूर तथा नीतू सिंहको बिहेमा त रेखा सिउदोमा सिन्दुर लगाएरै पुगेकी थिईन् ।
तर उक्त सिंदूर कस्को नामको थियो कहिल्यै खुलासा गरिनन् । जुन समय अमिताभ र रेखाको अफेयरको खबरले शिखर चुमेको थियो उक्त समय यी सबै खबर देखि दिक्क भएर जया बच्चनले रेखालाई डिनरको लागि बोलाएकी थिईन् । यो कुरा रेखाले नै आफ्नो एक इंटरव्यू मा बताएकी थिईन् जुन उन्ले फिल्म पत्रिका “स्टारडस्ट”लाई दिएकी थिईन् ।
1977 मा फिल्म म्यागजिन स्टारडस्टमा छापिएको लेखको अनुसार रेखा डराएर जया बच्चनको घर डिनरको लागी गएकी थिईन । उनि सोचिरहेकी थिईन् कि जयाले रिसमा उन्लाई गाली गर्छिन तर यस्तो केहि भएन मात्र जयाले खुब आरामसंग शानदार डिनर गराईन् साथै उन्ले आफ्नो घरको सजावटको कुराकानी समेत गरिन ।
यो सबै कुराहरु भयो तर अमिताभ बच्चनको बारेमा कुनै कुराहरु भएनन् । डिनरपछि रेखा त्यहाँ बाट हिडीन् तर हिड्ने बेलामा जयाले उनीसंग भनेकी थिईन् ‘चाहे तिमी जे भन तर म पनि अमितलाई कहिल्यै छोड्ने छैन ।”
रेखा भने पुरै दुनियालाई उनीहरुको सम्बन्धको बारेमा भन्न चाहन्थिन तर अमिताभ भने सधै हामी बिच केहि सम्बन्ध छैन भन्थे । सन् 1984 मा फिल्मफेयर म्यागजिनलाई दिएको एक इंटरव्यू मा रेखाले उनीहरुको सम्बन्धको बारेमा खुलेर भनेकी थिईन् । रेखा उक्त सम्बन्धको बारेमा सारा दुनियालाई भन्न चाहन्थिन तर अमिताभ बच्चन भने सधै मौन नै रहे ।
यसै क्रममा 1980 मा आएको एक खबरले पुरै धमाका गरिदियो । निर्माता-निर्देशक यश चोपड़ाले उन्को बन्न लागेको फिल्म ‘सिलसिला’ मा लीड रोल्समा अमिताभ, रेखा साथै जया बच्चनलाई पनि कास्ट गरे । मीडियाहरुमा यो खबर आयो कि उक्त फिल्ममा संगै काम गर्नलाई अमिताभले नै रेखा अनि जयासंग कुरा गरेका थिए । किनभने उनीहरु सबैले संगै काम गरेभने उनीहरु बिचमा भएको खटपटको सबै समाचारहरु गलत साबित हुन सक्थियो ।
फिल्म ‘सिलसिला’ मा अमिताभ तथा रेखा मिल्दैनन् र रियल लाइफ मा पनि यो फिल्म खेलेपछि उनीहरु कहिल्यै साथ-साथ देखिएनन् । फिल्म ‘कुली’ को शूटिंगमा भएको घटना पछि त पत्रिकाहरुमा खबर छापियो कि रेखा पनि अमिताभको खबर थाहा पाउनको लागि अस्पताल नै पुगेकी थिईन् तर उन्लाई अमिताभसंग मिल्न भने दिईएन । रेखालाई यो घटना पछी ठुलो धक्का लाग्यो ।